Umgangatho ophezulu wealuminium alloy 36V 250W umvelisi wombane webhayisekile kunye nomthengisi | IIMI
Umgangatho ophezulu we-Aluminium Alloy 36V 250W Bike yeSixeko soMbane
Kulabo bathanda ukusebenzisa ibhayisikile yabo rhoqo, baya kuwazisa amaxabiso aphuculweyo enza ukuba iMotion ibe ngumhambi ofanelekileyo kunye ne-e-bhayisekile yolonwabo.
Ibhayisekile inokuthatha okwangoku kwisakhelo sendabuko, kunye neempawu eziphuculweyo ezimnyama ezidibanisa ngokulula kwisakhelo. Ngelixa zinokungabonakali, oko kunempembelelo enkulu ekusebenzeni kwebhayisekile, ngakumbi ukukhwela ixesha elide.
Inkqubo ye-e-bhayisekile ye-sinowave igcinwe, kodwa ngoku isebenza ngokungqamanisa ne-Shimano 7 isantya sedrive drive ukunika umkhweli uluhlu oluninzi kakhulu kwisantya esingaphandle komda woncedo olunyovwayo lwama-32km / hr. Umgangatho wotshintsho ophuculweyo ukwabonakaliswa kwizinto eziqinileyo, ezigqithileyo ezinciphisa ukuguquguquka kwaye zinike impendulo eqinisekileyo.
I-Motor yangasemva ye-Hub
I-Emotion ikwi-motor ethe cwaka kwaye engasindi, kuphela yi-3.20KGS, kodwa yagqabhuka ibe lelona gunya likhulu, kunye nomgangatho ophezulu wenayiloni yegesi, yeyona moto ifunekayo kwintengiso. Ewe kunjalo, akukho sidingo sokugcina.
Tektro fracturing Disc iziqhoboshi
Ngaphambili nangasemva kweHydraulic idiskhi zebreki zeCalima zifuna ukugcinwa okuncinci. Iziqhoboshi zeediski zihlala zinamandla ngakumbi kwaye iibhuleki zincinci ngokukhawuleza xa kuthelekiswa nokuqhekeka komphetho.
Inamandla i-48v Lithium-ion Polymer Battery
I-Emotion ixhotywe ngebhetri ye-14Ah / 48V (672Wh) yeLi-ion Polymer enamandla kwaye yomelele. Ibhetri ye-14Ah inebanga ukuya kuthi ga kwi-60km. Ibhetri iyasuswa kwaye inokutshixwa. Yakhelwe kakuhle kwisakhelo. Itshaja ifakiwe nebhayisekile.
Ukurhoxiswa kweSithuba sePosi
Iibhayisekile ze-E azidingi ukuba umkhweli abe namandla kwaye asebenze ngokufanelekileyo kwaye ke kubavumela ukuba babe kwimeko ethe tye ngakumbi. Oku kubeka ngaphezulu kobunzima bomkhweli kwisali, kwaye ngenxa yoko isithuba sokumisa esixhonyiweyo sinokunciphisa amanye amajolonti angafunekiyo kwizitenxo kumatye
Ibhetri ye-48V 14Ah ilinganiswe ngexabiso le-800. Ibhetri iza nezibuko elihlanganisiweyo le-USB.
I-52V, i-2.5 Amp itshaja efanelekileyo, isebenza kwiivenkile zamandla ze-100V-240V AC
Umlawuli oSebenzayo 48V 25Ah (Uqhubeko lwangoku oluphezulu) i-18 transistor
I-500 Watt Nombinal, 2000 Watt Peak Motor ekwaziyo ukufikelela ngaphezulu kwesantya se-30 Mph
Inqanaba le-5 lokuNceda ukuNceda nge-12 yemagneti yeselfence.
1 kwisikrini, 1 kwibhetri
IHyraulic Tektro HD-E 350, 180MM iBrake Rotor
Tektro Dorado HDE350 Hydraulic Disc with 180 Rotors, Dual Piston Calipers, Three-Finger Levers with Motor Inhibitors and Adjustable Reach
IShimano Acera 7 iDerailleur
Inqanaba lesithuthuthu ingxubevange enkulu yoMsebenzi weFolokhwe, ehlengahlengiswayo
7 Isantya 1x7 Shimano AltusTZ25007428 Derailleur, 14-28 Cassette yezinyo
Ifolokhwe-Isiphatho esiHlangeneyo seAluminiyam ingxubevange, 670mm Ubude
Iindonga eziphindwe kabini, iAluminiyam ingxubevange, i-28 Hole, i-80mm Ububanzi.
Uhlobo olukhethekileyo lweCITYBIKE
I-Shimano AMFLTX50RCT SIS Index Isithupha Shifter
I-CST 27.5x2.40-Ukubetha okungafunekiyo
5-30 PSI, 0.4 ukuya 2.1 bar, 60tpi istili, ucingo bead
Egqithileyo Isithuthuthu sombane esiSigxina seAluminium
Okulandelayo: Ngasemva Strong cwaka Motor Motor Electric ibhayisekile